लोक दोहोरी गायकले आत्मह-त्या गर्नुको कारण यस्तो हुनसक्छ ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/लोक दोहोरी गायकले आत्मह-त्या गर्नुको कारण यस्तो हुनसक्छ !
आत्मह-त्याको प्रयास गरेका गायक दीपक परियारको उपचारका क्रममा मृ`त्यु भएको छ । गुल्मीको दबार गाउँपालिका स्थायी घर भई रुपन्देहीको तिलोत्तमा–१० कान्छीबजार बस्दै आएका उनी कोठाको सिलिङ फ्यानमा झु-ण्डिएको अवस्थामा भेटिए पछि उपचारका लागि यु निभर्सल मेडिकल कलेजमा लगिएको थियो ।
तर उपचारका क्रममा उनको मृ`त्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय मंगला पुरका प्रमुख लक्ष्मण थापाले जानकारी दिए । कान्छी बजारमा श्रीमतीका साथ दिदीको घरमा बस्दै आएका दीपक राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गित प्रतिष्ठान रुप`न्देहीका सदस्य हुन् ।
उनले बिहीबार मात्रै नयाँ गीत रेकर्ड गराएका थिए ।दीपकको श`व पो-ष्टमार्ट`मका लागि भैरहवाको भीम अस्पतालमा लगिएको र घट`नाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
केहि दिन अघिमात्र उनले सुशान्तलाई श्रद्धा`ञ्जली दिदै आर आई पी सुशान्त भनेर लेखेका थिए ।उनको निधन पछि केटिएम दैनिकले उनको फेसबुक अकाउन्ट नियालेको छ । जस्मा उनी एकदमै निराश, कोरोनाबाट त्रसित र डिप्रे-शनमा परेको जस्तै देखिन्छ ।